This entry was posted on Monday, June 30, 2008 and is filed under ဟိုရေးဒီရေး . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
မဇနိ ၉ တန်းစာမေးပွဲဖြေတော့ ကသုတ်ကရက်နဲ့ နာရီလည်းမေ့၊ ပေတံလည်းမေ့သွားတာ။ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်တော့ နာရီဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၊ ပေတံလေးငှားစမ်းပါ ပြောချင်တာ လောကြီးပြီး “ဟိတ် နာရီလေးငှားစမ်းပါ“ လို့ သွားပြောမိတယ်။ အဲဒီကောင်လေးကလည်း လူလည်ကျတယ် “ကိုကို့ နာရီလေးငှားပါလို့ ပြောရင် ငှားမယ်“ ဆိုပြီး စာရေးပြတယ် အညာသားရေ။ :P
အဲ့ဒါ အစ်မက ပြောလိုက်ကောလား...ဟီးဟီး နောက်တာနော အစ်မရ
ရီရတယ်..ဒါဆို ကောင်မလေးဘက်ကခံလိုက်ရတာပေါ. သူ.မှာ ခေါ်လဲခေါ်ရသေးတယ်... အဖြေလဲမရလိုက်ဘူး.. :D တော်တော် တင်းသွားမှာဘဲ
kae... call p naw
ko ko yay...
mee mee lae call chin lo. par :P
ကိုကိုလူလည်ပေါ့ အဲ့ကောင်လေးက ကိုညာများဖြစ်နေမလား အဖြစ်မှန်ဆို ၀န်ခံနော် မ၀န်ခံရင် လူပျိုကြီးဖြစ်ပါစေ ;)
ယောက်ျားတွေများ အဲလို ..အဲလို ကို အသားယူချင်တာ...။